★မြန်မာ့အလင်း★: Why I Left Islam (Ali Sina)
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားရေးဆိုပြီး နာမည်တပ်ပြီး ခိုင်းချင်တိုင်းခိုင်းလို့ မရပါဘူး။ မတရားဘူးလို့ထင်ရင် ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကမှ လုပ်မပေးပါဘူး။ အဲဒါကို ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မစည်းလုံးဘူးလို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ အဲဒါမစည်းလုံးတာ မဟုတ်ဘူး။ တရားမျှတမှုကို အလေးထားတာ။ မွတ်ဆလင်တွေကတော့ မွတ်ဆလင်ဘာသာအတွက်လို့ ပြောရင် တရားလား မတရားဘူးလား မတွေးတောဘူး။ ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတာပဲ။ အဲဒါက စည်းလုံးတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ လူဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ရှိရတယ်။ တရားမျှတမှုကို လိုလားရတယ်။ လူစိတ်မရှိလို့ လူလိုမတွေးတာ။ အဲလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာကတော့ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင် ၀ါဒကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အဲလိုစိတ်ထားတွေ ရှိနေတရွေ့ ဘယ်နိုင်ငံကမှ လူလိုဆက်ဆံမှာ မဟုတ်သလို ခင်ဗျားတို့ အချင်းချင်းလဲ မတရားသတ်ဖြတ်တာတွေ၊ မတရား ညှင်းပန်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ရပ်တန့်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်ဆလင်ကို ယုံကြည်ခဲ့သူ Alisina ဟာ သူဘာကြောင့် ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒကနေ ထွကလာခဲ့ရလဲဆိုတာ ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Alisina ဟာ ကမ္ဘာမှာ နာမည်အကြီးဆုံး မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး http://faithfreedom.org/ ကို တည်ထောင်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာလိုဘာသာပြန်ဖို့ အခက်အခဲရှိလို့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေအများစုက အဖြူကို အထင်ကြီးသူတွေဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်နိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့လဲ ယုံကြည်ပါတယ်။
(Arabs used to sleep with their maid slaves. Qur’an perpetuates this tradition Q.33: 52. Muhammad himself slept with Mariyah , the maid slave of his wife Hafsa, without marrying her.)
ဂွတ်ထ ၊ ဂွတ်ထ ။ ဆက်လုပ်ကြတောသားများ ။ တောသားများလုပ်ကြလို့ ကမ္ဘကြီးတိုးတက်ပြောင်းလံလာတာပါ ။ မူလက မြို့သားဆိုတာရှိတာမဟုတ်ပါ ။
Bravo... nice to see the true face of Islam and Mohamed.
i like to critic of wrong thinkings of people. but what i dont like is to create the violence between two faith. i have no idea this blogger is buddhist. he may be other religion or related to politic. so all reader be careful . dont make fault of urself because of other faults. this is importent time of our country. so dont waste ur time to read it.
l'islam n'a pas enfanter du nazisme, du communisme, du fashisme, du sionnisme... L'histoire est là pour en témoigner; des maux que l'occident judeo-chretien à fait peser sur le monde et fait encore peser sur l'humanité.
မွန်ဆလင်တွေက ဘာမှသိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး မှားလားမှန်လားလဲ မသိကြဘူး သူတို့ပလီဆရာက ဒီလိုလုပ်ဆိုရင်လိုက်လုပ်ကြတာ ပလီဆရာကမင်းမိန်းမကို ငါ့ကိုပေးဆိုလဲ ဘုရားသခင်ရဲံတမာန်တော်ဆိုပြီးပေးကြတာ တကယ်တော့မူဆလင်ဘာသာ ဟာဘာမှကိုအသိညဏ်မရှိတဲ့ ဘာသာပါ အစွန်းရောက်ဘာသာ သူတို့မှာပညာဆိုတာလဲမရှိဘူး အမှားနဲ့ အမှန်လဲခွဲခြားမသိကြဘူး အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးက မူဆလင်တွေထက်အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားတက်တယ် ကျနော်ပြောတာမယုံရင် မူဆလင်ဘာသာကိုလေ့လာကြည့်ပါ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် လူလောကနဲ့မအပ်စပ်တဲ့သွန်သင်ဆုံးမမူ့တွေဘဲတွေရလေ့မယ် မူဆလင်ဘာသာဝင်လူတယောက်ဟာ တိရိဆန် တကောင်နဲ့တူတယ်